टेक स्टार्टअपहरूको लागि चार संचार उत्तम अभ्यासहरू Martech Zone
टेक स्टार्टअपहरूको लागि चार सञ्चार उत्तम अभ्यासहरू
बिहीवार, जनवरी 6, 2011 बुधबार, अक्टोबर 29, 2014 एडम सानो
केही आन्तरिक र बाह्य सम्मिलित गर्दै संचार उत्तम अभ्यासहरू भविष्यको विकासको लागि ठोस आधार प्रदान गर्दछ।
सार्वजनिक सम्बन्धको मूल्य बुझ्नुहोस् - मुखको वचन र ट्वीटिंगले रूचि उत्पन्न गर्दछ र आजको प्रविधि खरीददारहरूको ईन्जेललाइजेशनको महत्त्वपूर्ण अंश हो। तर परम्परागत पीआर कार्यक्रमसँग विश्लेषकहरू र सम्पादकहरूको पहुँच छ र तिनीहरूसँग पाठकहरूको तयारी र वफादार दर्शक छन्। जब सम्पादकले ट्वीट गर्दछ वा तपाइँको कम्पनीमा लेख लेख्छ, हजारौंदेखि दशौं हजार हुन सक्छ जुन यसलाई अवलोकन गर्दछ। उद्योग विश्लेषकहरू र सम्पादकहरू पनि उद्देश्य विज्ञ हुन प्रतिष्ठा छ। तपाइँको समाधानको तेस्रो-पार्टी मान्यकरण एक आत्म-समर्थन भन्दा अधिक वजन बोक्छ। एक प्रेस सल्लाह संलग्न गर्नुहोस् जुन तपाइँको उत्पादन क्षेत्र मा अनुभव छ। तिनीहरूको अनुभव उठाउनुहोस् र विज्ञहरूसँग परिचित हुनुहोस् जसले तपाईंको जस्तो उत्पादनहरूलाई कभर गर्दछ। यी प्रभावकारीहरूलाई बजार क्रेक्शन, टेक्नोलोजी इनोभेसन र मेसेजिंग उद्योग प्रवृत्तिसँग अपडेटको साथ प्रभाव पार्नुहोस्। प्रेसको साथ दीर्घकालीन सम्बन्धहरू निर्माण गर्न प्रयास गर्नुहोस् र उनीहरूले प्रकाशन सामग्री निर्माण गर्न के चाहिन्छ भनेर बुझे।
बाह्य परिप्रेक्ष्य र अनुसन्धानको बिरूद्ध तपाईंको कर्पोरेट सन्देशको परीक्षण गर्नुहोस् - हैन कूलेड पिऊ र अन्धाधुन्ध रूपमा विश्व को बारे मा तपाईको प्रबन्धन दृश्य लाई स्वीकार्नुहोस्। आन्तरिक बयानबाजीलाई स्वीकार गर्दै जुन तपाईंको उत्पादनलाई "पहिलो, अद्वितीय, उत्तम, र ग्राहकहरू किन्नको लागि पंक्तिबद्ध हुनेछ" भनेर आश्वासन दिन्छ वास्तविकतासँग मेल खाँदैन र परीक्षण गरिनु पर्छ। यद्यपि आशावादीताको स्वस्थ खुराक मार्केटिंगको बारेमा हो, बजारमा के भइरहेको छ भनेर वेवास्ता नगर्नुहोस्। इमानदार हुनुहोस्। यदि तपाईं पहिलो र सबै भन्दा राम्रो होईन भने - यसलाई तपाईंको सुनौलो पिचमा नबनाउनुहोस्। (साथै सावधानीको शब्द: धेरै धेरै परिवर्णी शब्दहरू र बजवर्ड शब्दहरू प्रयोग नगर्न होशियार हुनुहोस्।) आन्तरिक र बाह्य रूपमा - सुपरलाइभेट्स सीमित गर्नुहोस्। तपाईको मेसेजि industryलाई बुलेटप्रुफ गर्नुहोस् तपाईको उद्योग विश्लेषकहरू र तपाईको प्रतिस्पर्धा र तपाइँले खेल्नुहुने मार्केटसँग परिचित विशेषज्ञहरूसँग। प्रत्येक उत्पादन वा सेवाको कुनै प्रकारको प्रतिस्पर्धी हुन्छ - एउटा कम्पनी एउटा कोटिमा नेता हुन सक्दैन। एक उत्पादन रोडम्यापको व्यवहार्यता समर्थन गर्न तथ्य, सर्वेक्षण र अनुमानहरू उत्पादन गर्न चुनौती व्यवस्थापन। साझा लक्ष्य कम्पनीको सफल हुनको लागि हो।
तपाईंको संगठनमा प्राविधिक र व्यापार समूहहरू बीच सञ्चारलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस् - एक स्टार्टअप मा संसाधन फैलाइएको छ तर मान्छे (सामान्यतया बिक्री र मार्केटिंग) जो तपाईंको भविष्य ग्राहकहरु संग कुरा गरीरहेको छ आफ्नो उत्पाद विकास टीम अलग गर्न प्रलोभनबाट बच्नुहोस्। प्राविधिक विकासकर्ताहरू कहिलेकाँही "कूल" टेक्नोलोजीको विकासमा सम्मिलित हुन्छन् जुन यो पक्का नगरीको छ कि भर्खरको गिज्मो यस्तो चीज हो जुन कसैको लागि भुक्तान गर्न चाहन्छ। टेक्नोलोजिष्टहरू जसले बजार आवश्यकताहरू र अवसरहरूमा ध्यान नदिई शून्यमा उत्पादनहरू विकास गर्छन् सम्भवतः त्यस्तो उत्पादन उत्पादन गर्दछ जुन कम्पनीलाई अपेक्षानुसार प्रक्षेपण गर्दैन। विकास टोलीमा बिक्री र मार्केटिंगबाट प्रतिक्रियालाई प्रोत्साहन दिनुहोस् र भविष्यको आवश्यकताहरूको साथ उत्पाद रोडम्यापलाई पign्क्तिबद्ध गर्न उद्योग प्रवृत्तिहरूलाई निगरानी गर्नुहोस्।
इलेक्ट्रोनिक युगमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न आवश्यक उचित उपकरणहरूको साथ कामदारहरूलाई सुसज्जित गर्नुहोस् - प्रभावी संचारको लागि मोबाइल फोन र ईमेल खाता भन्दा बढि आवश्यक पर्दछ। कम्पनीहरूले इलेक्ट्रोनिक बैठकहरू, तत्काल सन्देश प्रवाह र सम्मेलन लाइनहरूको लागि नीति र मापदण्डहरू सेट गर्नुपर्दछ। निर्बाध संचारका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयरका साथ कामदारहरूलाई सुसज्जित पार्नाले कर्मचारीहरूलाई पigned्क्तिबद्ध र उत्पादक बनाउँदछ। एक इलेक्ट्रोनिक मीटिंग सफ्टवेयर प्याकेजको प्रयोग (लगइन जानकारी सहित पूर्ण) सबैको लागि उपलब्ध हुनु आवश्यक छ जसले बैठकहरू शेड्यूल गर्दछ। सम्मेलन लाइनहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित पासवर्डहरू ज्ञात हुन र नियमित रूपमा समावेश गरिएका देशहरूमा स्थानीय लाइनहरू हुनुपर्दछ। अन्तिम तर कम्तिमा त्यहाँ डिजिटल रिपोजिटरी हुनु आवश्यक छैन जहाँ कर्मचारीहरूले आन्तरिक सञ्चार पोष्ट गर्न सक्छन् जस्तै कर्पोरेट निर्देशिकाहरू जुन तेस्रो पार्टी संचार माध्यम र सेल नम्बरहरू समावेश गर्दछ। आन्तरिक र बाह्य संचारको लागि मानक र दिशानिर्देशहरू सेट गर्नुहोस्। फोन कलहरू फर्काउन आवश्यक पर्दछ र ईमेलहरूलाई उत्तरदायी गर्नको लागि उत्तरदायी नीतिको भागको रूपमा।
तपाईंको प्रविधि स्टार्टअपमा यी सञ्चार उत्तम अभ्यासहरू थप्नाले सफलता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ तपाईंको टीम बढ्दै जान्छ र नयाँ विचारहरू र उत्पादनहरूलाई बजारमा सार्ने चुनौतीहरूको सामना गर्दछ।
एडम सानो को सीईओ छ एजेंटसौस, एक पूर्ण फिचर, स्वचालित रियल इस्टेट मार्केटिंग प्लेटफार्म प्रत्यक्ष मेल, ईमेल, एसएमएस, मोबाइल अनुप्रयोगहरू, सामाजिक मिडिया, CRM, र MLS को साथ एकीकृत।
के तपाईंले आफ्नो भर्खरको अभियानको परीक्षण गर्नुभयो?
जनवरी 7, 2011 मा 3: 02 एएम
राम्रो पोस्ट, खुशी! हामीसँग सामेल हुनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। केही नयाँ मिडिया ब्यक्तिहरूले सार्वजनिक सम्बन्धको शक्तिलाई पूर्णतया कम महत्त्व दिँदैनन् तर हामीले यसलाई हाम्रा ग्राहकहरूसँग कार्यमा देख्यौं!